सीपीएलः सन्दिपको टिमको खराब प्रदर्शन, सातौं विकेट पतन ! [अपडेट] – Everest Dainik – News from Nepal
सीपीएलः सन्दिपको टिमको खराब प्रदर्शन, सातौं विकेट पतन ! [अपडेट]
काठमाडौं, साउन ३१ । वेस्टइन्डिजमा भइरहेको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा आज नेपाली युवा खेलाडी सन्दिप लामिछाने आवद्ध सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियोट्स र जमैका तलवासबीच खेल भइरहेको छ ।
सन्दिपको टिमले पहिलो बलिङ गरेर अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ । उनको टिम प्याट्रियोट्सले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ । १० ओभरको खेल नसकिदै उसले महत्वपूर्ण सात विकेट गुमाएको छ । सातौं विकेटको रुपमा महुमम्द अल्लाह आउट भएका छन् । उनी २२ रन बनाएर पवेलियन फर्किएका हुन् ।
सन्दिपको टिमले १७९ रनको विजयी लक्ष्य पाएको छ । टस जितेर पहिलो फिल्डीङ रोजेको सन्दिपको टोलीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ४ विकेटको क्षतीमा १७९ रनको विजयी लक्ष्य पाएको हो ।
यस्तै, इभन लुएस शून्य रनमा नै पवेलियन फर्किदा टोम कोपर ७ रन बनाएर आउट भए । पाँचौ विकेटका रुपमा विकेट किपर थोमस आउट भएका छन् । उनी १० रन बनाउँदै आउट भएका हुन् । छैठौं विकेटको रुपमा बेन कटिङ आउट भएका छन् । प्याट्रियोट्सको यो तेस्रो खेल हो । उसले यसअघि एक खेल हारेको छ भने एक खेल जितेको छ ।